Uphengululo lweAlbhamu: Kendrick Lamar, 'DAMN.' - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa ‘I-DAMN .’— UKendrick Lamar Ushiye nje umsebenzi wakhe wobugcisa
‘I-DAMN .’— UKendrick Lamar Ushiye nje umsebenzi wakhe wobugcisa
Ngelixa abagxeki kunye noncwadi oluphambili begqogqa yonke iminyango kaKendrick Lamar's Ukunyibilika kwebhabhathane , ubunzulu obufanayo be-meta-textual eyenza ukuba i-LP ka-2015 ye-jazz-ye-dusty LP ibe ngumsebenzi wobugcisa ikwanike nezona zihlandlo zibalulekileyo zokuthengisa kwi-albhamu isheft exinene kakhulu kubalandeli abaninzi be-rap.
Amaxesha esithuba kwi-chorus ka-Alright ayekhona nje amathuba amafutshane okubamba umphefumlo wakho ngaphambi kwamazwi malunga nenkohlakalo yamapolisa kunye nesithembiso sexesha lokuphinda kwakhiwe lesithembiso seehektare ezingama-40 kunye nondlebende.
Ukuba mntwana olungileyo, isixeko wabona uLamar ebalisa amabali asondeleyo ukubonisa ukukhathazeka okukhulu ngaphandle kweCompton, emva koko Pimp yamkela ilensi ebanzi ebanzi yokuhluza kuyo yonke into-uhlobo-lokutsiba ngembali emnyama kunye nokukhutshelwa ngaphandle kweziko kwiindlela ezingaqhelekanga zaseMelika-ukujonga ubunzulu beyona nkxalabo inzima yeLamar.
Kodwa wayeza kuya phi ukusuka apho? Ukuba Pimp wayenjalo yonke into , njengoko kucetyisiwe, angayithetha njani into entsha?
Endaweni yokuba asisongele ngamabhongo awongamileyo, uLamar ufumana isitya esitsha sobukrelekrele bakhe ngokwenza elona cwecwe lorhwebo lomsebenzi wakhe ukuza kuthi ga ngoku DEMETHI .
Kukhutshwa iveki ephelileyo ngolwesiHlanu oLungileyo, kunye nexesha elinokuthi lingangqinelani, DEMETHI. babenabalandeli abatsala iipeni zabo ze-vape kwaye beprofeta ukuba imixholo ye-albhamu ejikelezayo yokufa kunye nokufa kwakuthetha ukuba ukulandelwa kuzakufika izolo, ngeCawe yePasika. ULamar yenza Ufe kumkhondo wokuvula IGAZI., Emveni kwakho konke, kwaye uthe tye ethathe indawo kaYesu kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela kuloo HUMBLE. ividiyo. (U-Lamar ubhiyozele ukukhutshwa ngokuvalwa komlenzeiCaweubusuku busetwa nguCahelhella, esenza amadlala amaninzi DEMETHI. iingoma zihlala, kwaye zilungiselela umboniso ojikeleze ifilimu entsha emfutshane, Igosa likaKang Fu Kenny , ebonisa ukuba unakho okanye angabinakho ukujoyina i-Wu-Tang Clan.)
Kodwa DEMETHI . ayiphumeleli ekondleni i Iingcamango zeReddit -Yokuqala kunye ne-albhamu yomzimba. I-bass ityebile, i-grooves ihlala ihleli, kwaye indawo yokuphefumla yanele.
Uhlobo lwangabom DEMETHI. 'S indlela yobuchule iphakanyisiwe isiciko secwecwe -Ijonge ubuso obungqindilili kwaye ingxola, inesilumkiso esiBanzi soMzali.
Iingoma ezinje ngoTHANDO., IRihanna ene-LOYALTY. KUNYE NEE element. Yonwabele obu bugcisa, ngelixa i-element. Ude aye kude ade ayokuboleka ngokuzithandela ukukhwela kwe-Drake-ukukhwela, ukuzilungiselela ngokuzenzekelayo, isimbo sokucula sokukhohlisa ngomdla wokukhumbuza abanye abavakalisi abaziintloko ukuba, nangona uLamar angenza ntoni bona yenza ngokulula, abasenakuchukumisa ukuhamba kwakhe:
Ukuba kufuneka ndibethe impama ye-pussy-esile, ndiza kuyenza ibonakale imnandi / Ukuba kufuneka ndihambe nzima kwi-bitch, ndiza kuyenza ibonakale imnandi / ndinyusa, ndiphume, ndiphume, ndenze ukuba ibonakale imnandi / Abayi kundikhupha.
UTHANDO., Ngento eyixabisayo, yeyona ngoma ithambileyo uLamar wakhe wabhalwa, mhlawumbi kwisithandwa sakhe uWhitney Alford, awayethandana naye ukusukela kwisikolo samabanga aphakamileyo kwaye uhlala naye ukusukela ngoko. Lelinye lamaxesha amaninzi kwirekhodi apho ukuvumela umkhondo ngamnye ukuba ugxile kwimvakalelo enye okanye injongo yethrekhi nganye ivumela ukujonga okusondele ngakumbi kubomi bukaLamar: KUTHANDO. uboleka ikhamera kwii-ofisi zeTop Dawg zokuzonwabisa ukuze abafilimise besenza uthando, kwiYAH. Usazisa ukuba umtshana wakhe wabona uGeraldo ethetha ngomalume wakhe uKendrick kuFox, kwaye usebenzisa lo mzuzu wokugqibela njengethuba elifanelekileyo lokusikhumbuza ukuba akazipolitiki.
Ngelixa uLamar ehlala ene-litany yeemvakalelo kunye neemood kwitraki enye, izihloko zomkhondo kwi DEMETHI . cebisa ngemicimbi ethile yesifundo eyongeza kwibhodi yeemowudi ezithile zengqondo, enikezela yonke imibutho yasimahla kwindawo efanelekileyo. Nakwi-FEEL., Xa uLamar ebaleka kuluhlu oludinisayo lwazo zonke izikhombisi zokungathembeki kunye noxinzelelo olongeza kwiimvakalelo zakhe akukho mntu umthandazelayo, ukwayekraza kwaye athabathe imvakalelo yokuziva kuyo yonke indawo kwaye edakumbile.
Andicingi, ndiyacamngca, utshica i-DNA., Kwaye kunzima ukuva DEMETHI. 'Ukucaca kombono njengeziqhamo zenkqubo enjalo. ILamar ikwakhombise nokucamngca kwakhe kwiitayile zangaphambili ayinasihloko 03, NgoLwesihlanu omnyama, nasemva koko DEMETHI. Ngethuba lokunyaniseka.
Kuya kufuneka ndibenemizuzu engama-30 ubuncinci kum, yena Kanye uxelelwe URick Rubin ungene GQ . Ukuba akukho mihla le, yonke imihla, ukuhlala nje, ukuvala amehlo am, kunye nokufunxa okwenzekayo. Uyazi, indawo endikuyo.
Mhlawumbi oku kucamngca kunika uLamar umoya wokuphefumla ukuze athethe noFox ngokuzola okunjalo ku-YAH., Emfumana ehambisa uYahweh, igama lesiHebhere likaThixo alibizayo kwi-DNA. Ekukhumbuzeni uGeraldo ukuba unamabhongo, amagama engoma aba ngamaxwebhu ali-14 kuLamar kuluhlu oluntsonkothileyo lweemvakalelo, njengamntu omnyama kunye negcisa elisebenza ukubonakalisa ubuncwane bangaphakathi balo ngaphakathi kweziseko zophuhliso zorhwebo.
Isiqingatha sesibini se-albhamu sibuyele kancinci ngakumbi, kunye ne-Bono-ene-XXX. Ukubonisa imigca yeklasikhi kungekudala, Dumisa uMariya, uYesu noYosefu / Iflegi enkulu yaseMelika / isongelwe kwaye irhuqwe ngeziqhushumbisi kwaye Jonga okusifundise kona! / Kukubulala esitratweni sam, kwisitalato sakho, kwizitrato zangasemva / eWall Street, iiofisi zenkampani / iiBhanki, abasebenzi, kunye nabaphathi nge / Iingcinga zokuzibulala; UDonald Trump useofisini / Silahlekelwe nguBarack kwaye sathembisa ukuba asisoze samthandabuza kwakhona / Kodwa ngaba iMelika inyanisekile, okanye ngaba siyonwaba esonweni?
Ukubhekisa kwimibutho efihlakeleyo kunye neengcebiso zokuba uya kufa ngathi aze afudukele eCuba ecaleni, ulwimi lukaLamar lumenza ukuba abe ngumgaqo-nkqubo wezopolitiko ngenxa yetalente yakhe ebalaseleyo ekunyangeni abo banokuthi cwaka kumgaqo-nkqubo wasekhaya kunye nokubawa komdibaniselwano kwinqanaba elifanayo. I-vitriol ayigcinele ii-rap ezimnandi-ziyinxalenye yengxaki efanayo.
NGOKOYIKO., Okwangoku, wakhomba izihlandlo ezithathu ezihlukeneyo ebomini bakhe- ngo-7, 17, nangama-27- ukuxoxa ngamaxesha apho uloyiko lwalumkhathaza ngokumazi okumangalisayo. Kwivesi yokuqala, ungumntwana obethwayo ekhaya; kweyesibini, woyika ukufa engaziwa ezandleni zabagibeli beqela lemigulukudu okanye amapolisa, omabini la macala afanayo nobugqwetha kwindawo yakhe; kweyesithathu, ukhumbula amaxesha okuzithemba ngexesha le I-Pimp Ibhabhathane ukukhutshwa, uloyiko lokuba impumelelo yakhe ayizinzanga.
Uninzi lwabantu baseNew York kufuneka bahlawule i-Therapist ngeli nqanaba lokuzazi kunye nokucaca, kodwa uLamar uyibeke yonke phaya, ezibamba phambi kwethu. Ngokunxiba impahla yorhwebo kunye nendawo DEMETHI. Njengemveliso yokusetyenziswa ngobuninzi, akabambeki nje kwezinye zezona zinto zisengozini yokukhumbula, iivesi zobuqu kwiphakeji eya kuthi ixatyiswe ngabantu-ukwasibonisile ukuba iyasebenza.
Ukuvalwa kwe-MTA ezantsi kweendlela, iibhasi kunye noololiwe ukuqala ngentsimbi yesi-7. NgeCawa [ihlaziyiwe]
'Umfazi Olungileyo' 7 × 13 Ukuphindaphinda: Imbali iyaziphinda
'Ungabalekela njani nokubulala' Ukuphindaphinda 2 × 12: Ngumgibe!
Ukulungiselela Ukuza Kwinkundla: Yintoni oza kuyinxiba kwi-US Open
Inkedama yemfazwe yamahlaya amadala
indlu ngomso movie
Iifilimu ezilungileyo zabantwana kwi-netflix
ezona zixhobo zokufunda ngaphambi kokuzilolonga
isebenza njani isixeko elanga